… ဖြစ်ရာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအုန်းကြိုင်က မိမိအနိုင်ရပြီဟု
လှည်းကူးမြို့နယ်တွင် ထောက်ခံမဲ နှစ်သောင်းကျော်ဖြင့် အနိုင်ရထားပြီး ကျေးရွာများမှ မဲစာရင်း အတိအကျ တက်မလာသေးကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ တိုက်ရိုက် တင်ပြခြင်း (၄၄)
၇ှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ ကလောမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်မြေ အောင်ပန်းမြို့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က မြို့ပေါ် ၁၂ရပ်ကွက်လုံးတွင် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိပါသည်။ ဟဲဟိုးမြို့တွင်လည်း NLD ကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိပြီး ဟဲဟိုးမြို့သူ မြို့သားများ အောင်ပွဲခံရန်စီစဉ်နေကြောင်းသိရပါသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မဲရုံ အမှတ် ၆ ၌ NLD ပါတီ အသာစီး ရရှိ
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁ (6: 43 PM )
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့ နယ် မဲရုံ အမှတ် ၆ ၌ NLD ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ပြိုင်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဆန္ဒမဲ ၂၀၀၀ ကျော်ဖြင့် အသာစီး ရရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါနေရာ၌ သွားရောက် သတင်းရယူခဲ့သူ The Voice Weekly သတင်းထောက် က သတင်းပေးပို့သည်။
ရေတွက်ပြီးစီးခဲ့သော ဆန္ဒမဲ ရလဒ်များမှာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ( မြန်မာ ) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ပါတီ ဦးသုဝေ ၂၈ မဲ၊မြန်မာ အမျိုးသား ကွန်ကရက် ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကောင်းမြတ်ထွဋ် ၃မဲ၊အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဖုန်းမြင့် ၈၅ မဲ၊အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း ၂၂၁၃ မဲ၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်လဲ့လဲ့အေး ၁၁၆ မဲ တို့ဖြစ်သည်။
ဒီညနေ မျက်နှာအတော်ပူခဲ့ရတယ်ဗျာ ။
ဘာလို့လဲ ဆရာ ။
မဲရုံမှာ မဲရေတွက်တာ သွားကြည့်မိလို့ပါခင်ဗျာ ။
ဟား ဟား ဟား ။
လက်ရှိအနေအထားများအရ နေပြည်တော်ရှိ မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးတွင် NLD ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အခြေအနေကောင်းလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမှာ ၇၉ ရုံရှိသည့်အနက် ရေတွက်ပြီး မဲရုံ ၄၀ ကျော်တွင် NLD မှ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
NLD Candidate U Sai Myint Maung likely to be won
with high rate of vote in Lashio constituency,
also from cantonment areas,
reported by Aung Myint Myat Cho (Myitmakha)
also from cantonment areas = စစ်တပ် ဒေသ မှာပါ အနိုင်ရရှိ ။
ကျွန်တော် သည်ကနေ့ မနက် ၇နာရီ၅၀ ခန့် မှာ ၊ အလုပ်သွားရင်း ၊ မဲဝင်ပေးခဲ့ပါသည် ။ မဲစာရွက်အောက်ဆုံးအကွက် ဦးအုန်းကြိုင် ဆိုတဲ့ လူရိုးကြီး ကို ခြစ်ပေးခဲ့တာပေါ့ဗျာ ။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ တုန်းက ကျွန်တော့်မိသားစု ၅ ယောက် ရှိခဲ့ရာ ၊ ၅ ယောက်လုံး မဲပေးဖို့ စာရင်းပါခဲ့ ၊ ပေးခဲ့ရပြီး ၊ ယနေ့ စာရင်းတွင်မူ ၊ လက်ရှိမိသားစု ၅ ယောက် မှာ ၁ ယောက် က အပြင်သွားနေသည်မှာကြာပြီဖြစ် ကို ၊ လက်ရှိမိသားစုထဲမှ နေထိုင်နေသည့်တစ်ယောက် မှာ နာမည်ပါမလာဘဲ ၊ အပြင်သွားနေသည့် တစ်ယောက်မှာမူ မဲပေးရန် စာရင်းပါရှိနေသည် ကို အံ့သြစွာတွေ့ ခဲ့ရသည် ။ ထို့ ကြောင့် ၃ မဲသာ ပေးခဲ့ရသည် ။ ထို့ အပြင် ၊ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှ မိသားစုသုံးယောက်မှာ တစ်ယောက်မှ နာမည်ပါမလာသည် ကို ဖြေရှင်းချက်တောင်းနေသည် ကို လည်းတွေ့ ရှိရပါသည် ။
ဒါတောင် ဒီလောက်ပြတ်နေတယ်နော် ကိုပေ။။
ကိုခင်ရီ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာ ပေါ်တာပေါ့ ။ သတင်းစာထဲမှာတော့ သန်းခေါင်စာရင်းတွေ မှတ်ပုံတင်တွေ လုပ်ပေးနေရတာ အမော ။
တနင်္သာရီတိုင်း လောင်းလုံမြို့နယ် ရေတွက်ပြီး မဲစာရင်းများ
ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၂ ၊ ညနေ ၆နာရီ ၅၆ မိနစ်
NLD USDP ပယ်မဲ
ချောင်းဖျားကြီးကျေးရွာ ၆၇ ၄၄
… ၀ါးမကိုက် ၄၆ ၁၈
စွန်းကြီး ၉ ၁၉
၁၀၄ တပ်ရင်း ၁ ၁၀၆
ညောင်ပင်ဆိပ် ၉၇ ၇
မဲမော် ၁၅၀ ၅၀
တောကျဲ ၁၇၂ ၅၈
ပြင်ကြီးကျွန်း ၁၁ ၁၂
ကထောင်းနီ ၂၄၀ ၄၀
ဖားအောက်ပြင် ၃၀၆ ၂၂
ရဘဲ ၁၂၃ ၈၁
ပန်းစိတ် ၉၇ ၃၆
ကရင်ကြီး ၁၉၆ ၂၃၅ ၂၇
ပန်းတင်အင်း ၇၁၀ ၅၃ ၃၂
ရှမ်းမော် ၁၃ ၆၅
သဘော့ဆိပ် ၈၇၀ ၄၂
ပြင်ကြီး ၅၃၄ ၁၆
မဲရုံ စုစုပေါင်း – ၁၀၇ ရုံတွင် ၇၄ ရုံ ရေတွက်ပြီး ရလဒ်
NLD – 27448
NLD Announced that theirCandidates Won in By-election in theses constituencies;
1) Kaumhu – Daw Aung San Su Kyi
2) Pyin Oo Lwin – U Kyaw Thiha
3) Magway – U Myint Thein
4) Mandalay / Ma Har Aung Myay – U Ohne Kyine
5) Dagon Sate Kan – Dr Myo Aung
6) Mingalar Taung Nyunt – Daw Phyu Phyu Thin
7) Pwint Phyu – Dr Aaung Moe Nyo
Kyoon Su –
9) Laung Lone – U Aung Soe
10) Sagine – U Khin Maung Soe
11) Pa le – Daw Khin San Hlaing
12) Pakhotekyu – U Pite Ko
13) Nay Pyi Daw / Dakhana Thiri – U Nyan gan linn
As incoming results, NLD won in these constituencies;
Bago Division, Kawa,
Mandalay Division, Kaukpandaung,
Yangon Division, HLegu, Mayankone.
List are as below;
14)U Myo Khine from Kawa
15)Dr Zaw Myint Maung from Kauk pa daung
16)U Phyo Min Thein from Hlegu
17)Daw May Win Myint from Mayankone
18)Daw Myint Myint San (Daw Cho) from Wakhama
19) Dr Tin Htay Aung from Yayzacho likely to be won
ယခုအထိ အေးချမ်းစွာ ပြီးဆုံးမှုအတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
ကချင် ပြည် နယ်တွင် မဲပေး ခွင့် ရရေး ရှေ့ တစ်ပတ် အတွင်း ဆန္ဒပြ ကြမည် ဟု သိရသည်။
ကချင် ပြည်သူ လူထု အားထောက်ခံ သောအားဖြင့် ရန်ကုန်၌လည်း ဆန္ဒပြ ကြမည်။
၁၆) သိဂါင်္မဲရုံ (၁) တွင် NLD ၈၆၇ မဲဖြင့် နိုင်။
၁၈) လင့်ငင်ရွာတွင် NLD ၄၂၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂ မဲ။
၂၃) မြို့ဦးရပ်ကွက်တွင် NLD ၄၅၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၆ မဲ။
အင်းးးးးးး မအံ့သြတော့ပါဘူးလေ ။
ဒီပြိုင်ပွဲဟာ ဒေါ်စု ရဲ့ NLD နှင့်
စစ်တပ် ရဲ့ ကြံ့ဖွတ် ပြိုင်တာမှ မဟုတ်တော့တာ ။
တရား မျှတမှု နှင့် မ တရားမှု ။
ဖိနှိပ် ခံ နှင့် ဖိနှိပ် သူ ။ ပြိုင်ကြသလို ဖြစ်နေတာကိုး ။
ဒီ အဖြေပဲ ထွက်တော့မှာပေါ့ ။
ဒီ အဖြေပဲ ထွက်သင့်တာပေါ့ ။
ဟုတ်ပ အဘဖော ရေ။ အရမ်းမှန် တဲ့အတွက် လက်မတွေ အများကြီး ထောင်သွားပါတယ်။
ကြံ့ဖွတ် တကောင်အထဲ့ ဝင်ပြီး အနီတွေ ပေနေတယ်ဟေ့။ ကိစ္စ မရှိပါဘူး ( There is no invention to cure the jealously since beginning of mankind ) ဆိုတော့………..
ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲဆန်ဒနယျ အသီးသီး၌ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျလကျြ ရှိသော ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားတှငျ မဲရရှိမှု အနအေထားအရ အနိုငျရနိုငျဖှယျ ရှိသော ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို အစိမျးရောငျဖွငျ့ ပွသထားပါသညျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ (NLD) − ၁၀၀၅၀ မဲ
ဒေါကျတာစိုးမငျး(USDP) − ၁၅၀၆ မဲ
ဦးတငျရီ(ညီညှတျရေးနှငျ့ငွိမျးခမျြးရေး) – ၄၉ မဲ
Dr. မြိုးအောငျ (NLD)
ဒျေါဖွူဖွူသငျး(NLD) – ၂၂၁၃ မဲ
ဒျေါလဲ့လဲ့အေး(USDP) – ၁၁၆ မဲ
ဦးသုဝေ (ဒီမိုကရကျတဈ) – ၂၈ မဲ
ဦးကောငျးမွတျထှဋျ(ကှနျဂရကျ) – ၃ မဲ
ဦးဖုနျးမွငျ့ (NNDF) – ၈၅ မဲ
ဦးဖွိုးမငျးသိနျး (NLD) − ၁၂၀၇၈ မဲ
ဒေါကျတာအောငျမွတျသူ (USDP) − ၄၇၅၅မဲ
ဦးဇငျအောငျ (လူ့ဘောငျသဈ) – မသိရသေး
*(မဲရုံ ၁၆ ရုံရလဒျ)
Dr. ဒျေါမဝေငျးမွငျ့ (NLD)
ဦးအုနျးကွိုငျ (NLD) − ၁၂၉၇ မဲ
ဦးသနျးထှနျး (USDP) − ၁၅၃ မဲ
ဦးထှနျးကွညျ (တစည) – ၂၄ မဲ
ဦးလှကို (NDF) − မသိရသေး
Dr သနျးထိုကျဦး (ပွညျသူ့ဒီမို) – မသိရသေး
ဦးစိနျလှ (တသီး) – မသိရသေး
ဦးကြျောကြျော (တသီး) – မသိရသေး
ဦးညှနျ့ဦး (တသီး) – မသိရသေး
ဦးလှမွငျ့ (USDP) − ၁၄၈၉ မဲ
ဦးဝငျးထိနျ (NLD) − ၁၃၁၆ မဲ
ဒျေါမွငျ့မွငျ့အေး (တသီး) – ၇၀ မဲ
ဦးဝငျးဇျော (မဟာမိတျ) – ၂၁ မဲ
* (မဲရုံရှဈရုံ ရလဒျ)
ဦးပေါခငျ(NLD) − ၆၀၆ မဲ
ဦးစိုးနိုငျဝငျး(USDP) − ၄၇ မဲ
ဦးအောငျသနျး(တစည) – ၁ မဲ
*(မဲရုံ နှဈရုံ ရလဒျ)
ဒျေါစန်ဒာမငျး(NLD) – ၁၀၄၇ မဲ
ဦးဝငျးဌေး(USDP) – ၅၅၄ မဲ
ဦးနိုငျငံလငျး(NLD) − မဲ ၇၀၀၀ ကြျောဖွငျ့ အနိုငျရရှိကွောငျး သတငျးရရှိ
ဦးမောငျဝငျး(ခ) ဦးအောငျဝငျး (တစည)
ဦးသိမျးကွညျ (အမြိုးသားနိုငျငံရေး မဟာမိတျမြားအဖှဲ့ခြုပျ)
Dr အောငျမိုးညို (NLD)
Dr တငျဌေးအောငျ (NLD)
Dr. နနျးကိနျဖောငျးတဈ (USDP)
ဦးလျောဆငျကှမျး (ကိုးကနျ့ ဒီမိုကရစေီနှငျ့ ညီညှတျရေး ပါတီ)
Dr. ဒျေါသနျးငှေ (NLD) − ၅၁၃ မဲ
ဦးမွဝငျး (USDP) − ၁၄၅ မဲ
ဦးလှ(ခ) ဦးခငျမောငျလှ (တစည) – ၁၅ မဲ
စဝျသာဦး (SNDP) − ၇ မဲ
ဦးခှနျသနျးမောငျ(ပအိုဝျး) – ၁၃၂ မဲ
ဦးအောငျစိုးမွငျ့ (NLD) − ၃၀၆၈ မဲ
Dr ဒျေါဝဝေသော (USDP) − ၃၇၃ မဲ
ဦးဝငျးထှနျး (NDF) − ၃၀ မဲ
Dr စိနျထူး (USDP)
တိုငျးဒသေကွီး လှတျတျော (ကဝ-၂)
ဦးစိနျဝငျးဟနျ (ခ) ဦးစိနျဝငျး (NLD)
Dr မြိုးသနျ့တငျ (USDP)
Dr. သနျးထှဋျ (USDP)
ဦးကြျောလငျး(ခ) ဦးသနျးဦး (ခတျေသဈ)
Dr. လှမွတျသှေး (NLD)
Dr မွငျ့နိုငျ (NLD)
ဒျေါခငျစနျးလှိုငျ (NLD) − ၉၉၂ မဲ
ဦးဌေးနိုငျ (USDP) − ၃၇၃ မဲ
ဦးဟိနျးထကျအောငျ (ပွညျသူ့ဒီမိုကရစေီပါတီ) – ၂၈ မဲ
. ငါ့ ငါးထောင်တန်တွေပြန်ပေး ……
ဟီးဟီး (ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း ငိုသံ)
ဟီး ဟီး (လူထုရီသံ) ။။။
ရေဦးမဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ပါတီမှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာမြင့်နိုင်က
၈၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားကြောင်း
ရေဦး မြို့ခံတစ်ဦးမှ CJMyanmar သို့ သတင်းပေးပို့ပါသည်။
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်တွင် မဲရုံစုစုပေါင်း ၁၇ ရုံရှိသည့်အနက် ရန်အောင်မြင် မဲရုံတစ်ရုံသာ ရှုံးနိမ့်ပြီးကျန်မဲရုံများတွင် အနိုင်ရရှိသည်ကြောင့် ၄င်းနယ်မြေကိုယ်စာလှယ်မှာ NLD ပါတီမှ ကိုနိုင်ငံလင်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဇဗ္မူသီရိ မြို့နယ် တွင်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သော NLD ပါတီ မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ဒေါ်စန္ဒာမင်း သည် မဲရုံစုစုပေါင်း ၃၈ ရုံ ရှိသည့် အနက် လတ်တလော ၂၃ ရုံ မဲစာရင်းရေ တွက်အပြီးတွင် မဲရုံ ၂၀ တွင် အနိုင်ရရှိကာ မဲရုံ ၃ ရုံတွင်ရှုံးနိမ့်ထားေ ကြာင်း ဒေါ်စန္ဒာမင်း၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ စိုင်းဝင်းနိုင်ဦးမှ Popular News သို့သတင်းပေးပို့သည်။
ပုဗသီရိမြို့နယ်တွင် ဦးဖြိုးဇေယျာသော် အနိုင်ရ
အဘဖောရေ….. အဲဒိသတင်းကိုစောင့်နေတာဗျ…။ အဲဒါမှ …………။…….. နိုင်ပြီ ဒို့ဗမာနိုင်ပြီ ဒီမှာကော်နက်ရှင်နှေးနေတာ ဘာမှဖွင့်မရဘူး…။ ဒီကောင်တွေ ရှုံးလို့ တွက်ထားပြီသား…။
ဇမ္ဘူသီရိမြို့နယ်တွင် မဲရေတွက်မှု မပြီးသေးဘဲ ရေတွက်ပြီးသမျှမှာ NLD ပါတီမှ ဒေါ်စန္ဒာမင်း အနိုင်ရရှိနေကြောင်းသိရသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ ကြိုတင်မဲများ NLD နှင့် NDF ပါတီ ပူပေါင်း ကန့်ကွတ်
ပုသိမ်၊ ဧပြီ ၁ (7: 19 PM )
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ မြို့ တော် ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ ရရှိထားသော ကြိုတင်မဲ ၁၂၀၀ ကျော်အား အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ပူးပေါင်း ကန့်ကွတ်ကြောင်း အဆိုပါ မဲဆန္ဒနယ်၌ သွားရောက် သတင်းရယူနေသူ The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ပုသိမ် အခြေစိုက် တပ်ရင်း ၄၂၄ ပေးပို့လာသော ဆန္ဒမဲ ၁၂၀၀ ကျော်တွင် တာဝန်ခံ၏ လက်မှတ် ပါရှိသော်လည်း နာမည် ပါရှိမှုမရှိသဖြင့် ယင်းသို့ ကန့်ကွတ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီမှ ဦးမင်းသူ အနိုင်ရရှိ။
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရီမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီမှ ဦးနိုင်ငံလင်း အနိုင်ရရှိ။
ဇမ္ဘူသီရိမြို့နယ်တွင် မဲရေတွက်မှု မပြီးသေးဘဲ ရေတွက်ပြီးသမျှမှာ
NLD ပါတီမှ ဒေါ်စန္ဒာမင်း အနိုင်ရရှိနေကြောင်းသိရသည်။
နေပြည်တော်မှာ ကိုမင်းသူက လွဲရင် ကျန်တဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးစလုံး
မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရရှိကြောင်း မြစ်မခ သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း ရေကြည် မဲဆန္ဒနယ် ၂ က NLD အမတ်လောင်း ဒေါက်တာလှမြတ်သွေး
အနိုင်ရရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဖျာပုံမှာလည်း NLD ကိုသိမ်းဆွေ အနိုင်ရရှိပြီး၊
သုံးခွမြို့နယ်တွင်လည်း ဒေါ်စုစုလွင် အနိုင်ရရှိလျက်ရှိကြောင်း
မြစ်မခ သတင်းထောက်များမှ သတင်းပေးပို့လျက်ရှိသည်။
Update 7:18 PM
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင်ရှိသော ရပ်ကွက် ၂၀ တွင် မဲရုံ ၆၈ ရုံရှိရာ ၅၉ ရုံတွင် NLD အနိုင်ရပြီဖြစ်ကြောင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့် NLD ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီမှ အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးရန်စောင့်ဆိုင်းနေပြီဖြစ်သည်။
၎င်းမဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၁၆,၄၆၉ ဦးရှိပြီး NLD ၇,၄၅၃ မဲ နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ၄,၁၇၃ မဲရရှိခဲ့သည်။ ၃၂၈၀ မဲအသာဖြင့် NLD ကအနိုင်ရခဲ့ပြီး အခြားမဲများမှာ ပယ်မဲများနှင့် မဲလာမပေးကြသူများရှိသည်ဟု NLD အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကပြောသည်။
မဲရုံ ၁၇ ရုံရှိသည့်အနက် ရန်အောင်မြင်မဲရုံမှလွဲ၍ ကျန် ၁၆ ရုံတွင် NLD မှ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
မဲရုံ ၁၀၇ ရုံရှိသည့်အနက် ၉၇ ရုံရေတွက်ပြီးချိန်တွင်
NLD ၃၂,၇၇၄ မဲ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ၅၉၈၁ မဲရရှိနေသည်။
update : 7:38 PM
လာရှိုးမြို့ ထောက်ပို့တပ်ရင်း ၆၂၆ မှ ကြိုတင်မဲ ၅၆၇ မဲရှိရာ မဲပုံးပွင့်နေသဖြင့် ကော်မရှင်က ပယ်မဲအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်
စစ်ကိုင်းမြို့တွင် NLD ပါတီ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် နိုင်ရရန် သေချာနေပြီဖြစ်ကြောင်း
ကျန် မဲရုံတစ်ဆယ်ကျော်မှာ မဲရေတွက်နေဆဲဖြစ်သည်။
NLD ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်မေ၀င်းမြင့် ရရှိသည့် မဲအရေအတွက်
များနေသည့်အတွက် မိမိအနေဖြင့် စိတ်ပျက် မိကြောင်း
တကယ်တမ်း မိမိ ရှုံးနိမ့်ခဲ့မည်ဆိုပါက ယင်းအရှုံးပေါ် မည်သို့မျှ မပြောလိုပါကြောင်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဦးရဲထွဋ်က
ယနေ့ည ၇နာရီင်္ ၁၅မိနစ်တွင် ပေါ်ပြူလာနယူးစ်
၏ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ် မေးမြန်းမှုအား ဖြေကြားသည်။
ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ထန်းကုန်းကျေးရွာတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်း ၈ နာရီခန့်က မဲရုံသို့ မဲလာပေးသူ မောင်ရန်နိုင်စိုးသည် လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုခန်းအတွင်း၌ မဲဆန္ဒလက်မှတ်ပေါ်တွင် NLD ပါတီဘေးမှ အမှန်ခြစ်ပြီး မဲပုံးအတွင်းသို့ မထည့်မီ မဲရုံမှူး ဦးမောင်မောင်ခင် ထံ “ပယ်မဲဖြစ်မည်စိုး၍ သူမဲပေးသည်မှာ မှန်မမှန် ကြည့်ပေးရန်” သွားရောက်ပြသရာ မဲရုံမှူးက “၄င်းအား ရန်စ၊ စော်ကားသည်” ဟုယူဆပြီး
အဆိုပါ မောင်ရန်နိုင်စိုးအား ဖမ်းဆီးရန် မဲရုံလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူများအား ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။
မြို့နယ် NLD တာဝန်ရှိသူများက လာရောက် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှပင် အဆိုပါ မောင်ရန်နိုင်စိုးမှာ ပြန်လွတ်မြောက်လာရကြောင်းသိရသည်။
မနက်ဖြန်ကြမှ ငါ့ ကြက်ဖွတ် နိုင်ဒယ်လို့ လေဒီယိုဂနေ ကြေညာဗျစ်မယ်
Face Book ပေါ်မှာကော
မြန်မာပြည် နေရာ အနှံ့ မှာကော
စတင် အောင်ပွဲခံနေကြပါပြီ ။
Landslide Victory ပါ ။
အနိုင်ဟာ ပြတ်သားလာပါပြီ ။
အမှန်က အမေစု နှင့် NLD ရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ အနိုင်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနှင့်
အစိုးရက မနက်ဖြန်ကို အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက် လုပ်ပေးသင့်တယ် ။
ပုသိမ်တွင် ဒီချုပ် နိုင်ခြေများနေဟု ပုသိမ်မြို့ ဒီချုပ် အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များက ပြော။
ဧပြီ ၁ ၊ ၂၀၁၂၊ ည ၇ နာရီ ခွဲ
ယခုချိန်ထိ ရေတွက်ပြီးသမျှမဲများအရ ပုသိမ်မြို့တွင် ဒီချုပ် မှ အောင်နို်င်ရေး အဖွဲ့ဝင်များက ပြောသည်။ ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ၀န်းကျင်ရထားပြီဟု ၀င်လာသည့် စာရင်းများကို ကိုးကားကာပြောဆိုသည်။
အခြားသိရှိရသည့် မဲဆန္ဒနယ်များမှာ မြောင်းမြတွင်လည်း ဒီချုပ်နိုင်ရန် သေချာသလောက်ရှိနေသည်ဟု YPI သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ကိုဘုန်းကျော် တော့ ဆိတ်သတ်နေလောက်ပြီ… :grin:
NLD ပါတီမှဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သော
” ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦးစလုံး ” က
” မြို့နယ် ၄ မြို့နယ် စလုံး ” တွင် အနိုင်ရရှိ သွားပြီဖြစ်ကြောင်း
နေပြည်တော်၏ NLD အသိုက်အ၀န်းမှသတင်းပေး ပို့ခဲ့သည်။
ကဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ် တွေရေ ပြည်သူတွေ ဘက်ကတော့ တာဝန်ကျေသွားပါပြီ။ ခင်ဗျား တို့ဘက်ကတာဝန် ကျေဖို့ပဲ လိုတော့တယ်။ Hearted Congratulation to all of you !!!!!!!!!!!!!